အင်တာနက် လျှောက်ထားသော မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ ၂၄ နာရီအတွင်း အသုံးပြုနိုင်မည် ~ Myanmar Express
ရုရှားရှိ နှုကလိယ ရေငုပ် သင်္ဘောများကို ဂျပန်တို့ ကူညီ ဖျက်သိမ်းပေးမည် ~ Myanmar Express
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် နှင့် လုံခြုံရေး ကွန်ပျူတာ သမား တို့ မွေးထားတဲ့ တတိယ မြောက် မျိုးဆက်သစ် ဒေါ်စုကြည်ရဲ့သမီး ခင်ရွှန်းလဲ့ဝေ ~ Myanmar Express
၀မ်းဗိုက်အဆီတွေ လျှော့နည်းစေဖို့ ~ Myanmar Express
နိုင်ငံခြားဘဏ်စာရင်း နေ့ချင်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ ~ Myanmar Express
ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံရုံးဆိုင်ရာ ၀က်ဘ်ဆိုက်များ နှင့် နိုင်ငံခြား သံရုံး လိပ်စာ၊ ဖုံးနံပတ် များ ~ Myanmar Express
ကားဈေးဂယက်ကြောင့် ဒေါ်လာဈေးတက် ~ Myanmar Express
Egyptian Air Force EAF.wmv
Install MacOSx on Windows PC (မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်မှကူးယူမျှဝေသည်)
Apple Laptop တွေကို သရေကျခဲ့တာကြာပါပြီ။ ခု MacBook Pro ထိဆိုပါတော့။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း မ၀ယ်နိုင်သေးတော့ Windows PC ပေါ်မှာ Run လို့ ရကိုရနိုင်ရမယ်လို့ စိတ်ကတော့ ထင်မိပါတယ်။ ဒါနဲ့ KoThurein ကို မေးကြည့်တော့ ရတယ်တဲ့။ သူ့ဆီမှာတောင် MacOS Install DVD ရှိတယ်ဆိုတော့ Mac ရူးတဲ့ရောဂါက ကုလို့မရတော့ဘူး။ အင်တာနက်ထဲမှာလည်း ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့မွှေပါတယ်။ iATKOS, iPC, iDeneb, jas osx86, Kalyway, Installer DVD တွေလည်းတွေ့ပါတယ်။ KoThurein ဆီကရတဲ့ DVD က iATKOS v4i ပါ။ အစကတော့ ကျွန်တော် VMWare 7.0 ပေါ်မှာပဲ Run ကြည့်တော့ မရပါဘူး။ ဒါနဲ့ Virtual Box ပေါ်မှာ Run ကြည့်တယ်။ မရပြန်ပါဘူး။ မထူးပါဘူး။ PC ပေါ်မှာ တစ်ကယ် Install လုပ်ကြည့်တယ်။ Install အဆင့်ကနေဆက်တက်မလာဘူး။ ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ မအားတာနဲ့ ရပ်ထားလိုက်တယ်။ ဒီကြားထဲမှာ iATKOS i5, iPC ဆိုတာတွေလည်း ရူးပေါပေါနဲ့ Download ထိုင်ဆွဲလိုက်သေးတယ်။ နှစ်ခုပေါင်း 5.5GB လောက်ရှိမယ်ထင်တာပဲ။ နောက်ဆုံးတော့လည်း ခွေဆိုင်သွားပြီး မေးကြည့်လိုက်တော့ iATKOS v1 လေးတွေ့ပါလေရော။ အဲ့ဒီ Insatller လေးနဲ့ Windows PC ပေါ်မှာ MacOSx 10.5.2 ကို ဘယ်လို Install လုပ်ရလဲဆိုတာပြန်ပြီး Share လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ခုကျွန်တော်စမ်းသပ်ခဲ့တာလေးကိုမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်၊ မစမ်းသပ်ဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7300 @2.66GHz
Corsai DDR2 1GB x 2
iATKOS v1 or Other Installer
BootCD (EmpireEFI_V108, Netbook CD, pirate_efi_x_v0.3,BOOT-DEF-146-BUM, etc)
iATKOS Installer ကိုမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်လည်း အပင်ပန်းခံပြီးတော့ တစ်ခြား Installer DVD တွေကို Download ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ ဆိုင်တွေမှာမတွေ့ဖူးလို့ပါ။ (ရှိချင်ရှိမှာပါ)
အင်တာနက်ထဲမှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ BootCD တွေကတော့ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တာ အဆင်ပြေရာကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့ HDD 320GB တစ်လုံးတည်းသုံးတာလည်းဆိုတော့ Multi Boot မလုပ်ချင်လို့ပါ။ အလုပ်လည်းရှုပ်ပါတယ်။ လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ EasyBCD_2.0.2 ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
Step 1: ပထမဆုံး BIOS ထဲမှာ Fire Boot ကို CD/DVD ပေးခဲ့ဖို့တော့ လိုပါမယ်။ iATKOS v1 DVD နဲ့ Boot တက်ပါမယ်။ Darwin/x86 နဲ့ iATKOS က Boot တက်လာပြီဆိုရင် F8 ကိုနှိပ်ပြီး Option ကနေတစ်ဆင့် ကျွန်တော်တို့ Install လုပ်ပါမယ်။ F8 ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ဆက်ပြီး Install လုပ်ဖို့အတွက် -v နဲ့ ဆက်လုပ်ခိုင်းပါလိ့မ်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ -v -f busratio=20 လို့ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
ဒီနေရာမှာ တစ်ခုပြောချင်တာက busratio က တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ဆိုရင် Asus မှာ busratio=20 သုံးပြီး၊ Acer မှာတော့ busratio=7 သုံးရပါတယ်။ တစ်ခြားစက်တွေအတွက်ကတော့ Google ကို မေးကြည့်ရမှာပဲ။ -v -f busratio=20 လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ရင် Installer Loading လုပ်ပါပြီ။ အလကားမနေပါနဲ့ လိုက်ဖတ်ကြည့်ပါ၊ ဘာတွေပါလိမ့်. ကျွန်တော်တော့ အကုန်နားမလည်ပါဘူး။ Installer က Loading လုပ်နေတုန်း အောက်ကပုံလို System uptime in nanoseconds: xxxxxxxx မှာပဲ ဘယ်နှစ်ကြိမ် Boot လုပ်လုပ်ရပ်နေမယ်ဆိုရင် တစ်ခြားစက်တစ်လုံးမှာ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် Installer DVD ပြောင်းသုံးကြည့်ပါ။ iATKOS v1 ကတော့ တော်တော်များများနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း Acer 4736z မှာတင်ဖူးပါတယ်။ အိုကေပါတယ်။
Step 2: အပေါ်က Loading ပြီးသွားရင်တော့ GUI လာပါပြီ။ ဘာမှရွေးစရာမပါပါဘူး။ Click the button to Continue.. ပါပဲ။ အောက်က Button အ၀ိုင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးသွားလိုက်ပါ။ Preparing Mac OS X Leopard Installation... ကို ခဏစောင့်ပေးပါ။ ပြီးရင် Welcome Screen နဲ့အတူ အပေါ်က Menu ကိုမြင်ရပါမယ်။ Continue နဲ့မသွားခင် အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Windows တင်သလိုပဲ HDD ကို ပြင်ဆင်ရပါဦးမယ်။ Menu > Utilities > Disk Utility ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော့် 320GB အနေနဲ့ပဲပြောမယ်နော်။ ကျွန်တော်တပ်ထားတာ HDD တစ်လုံးဆိုတော့ Disk ကလည်းတစ်လုံးတည်းပေါ့။ ကျွန်တော် Partition နှစ်ပိုင်းခွဲပါမယ်။ Disk ကိုရွေးပေးပါ။ Partition Tab ကိုသွားလိုက်ပါ။ Current လို့ဖြစ်နေတဲ့နေရာကနေ ကိုယ်ကြိုက်သလို Partition ပိုင်းလို့ရပါပြီ။ ကျွန်တော်ကတော့2Partitions ကိုပဲရွေးလိုက်ပါတယ်။ C: နဲ့ D: ဆိုပြီး Partition ပိုင်းခဲ့သလိုပါပဲ။ တစ်ဆင့်တက်ပြီး Partition Size ကို Custom လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Custom လုပ်ချင်တဲ့ Partition ကိုရွေးပြီး Size နေရာမှာ လိုအပ်သလောက် ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ Untitled 1 ကို ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေး၊ ပြီးတော့ Size ကိုလည်း ကြိုက်သလောက်ထား။ ကျွန်တော်ကတော့ MacOSx and 50GB လို့ထားလိုက်ပါတယ်။ Format မှာတော့ Mac OS Extended (Journaled) ကိုရွေးရမှာပေါ့။
Options ကိုနှိပ်ပြီး GUID Partition Table ကိုရွေးပေးလိုက်ပါဦး။ ပြီးပြီဆိုရင် Ok နှိပ်၊ Apply ကိုထပ်နှိပ်၊ Partition Disk လုပ်မှာလားဆိုရင် Partition ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ Partition ပြီးသွားပြီဆိုရင် Verify လုပ်ကြည့်ပါဦး။ Show Details နေရာမှာ The Volume Data appears to be OK. ဆိုရင် ရပါပြီ။
Disk Utility ကိုပိတ်လိုက်ပါ။ Welcome screen ကနေပြီးတော့ Continue ကို နှိပ်နိုင်ပါပြီ။ ထုံးစံအတိုင်း လိုင်စင်ပေါ့၊ Agree ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ SelectaDestination ကိုရောက်ပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Install လုပ်မဲ့ Partition ကိုရွေးပေးလိုက်ပါဦး။ 5GB နေရာယူပါလိမ့်မယ်။ Continue နဲ့ဆက်သွားလိုက်ပါ။
Install Summary နေရာမှာတော့ Customize ကိုနှိပ်ပြီး Install Package ကို ထည့်နိုင်၊ ဖြုတ်နိုင်ပါတယ်။ Patches တွေ၊ Drivers တွေ စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်အဲ့လိုလျှောက်ထည့် လိုက်တာအကြိမ်ရေတော်တော်များများ Error နဲ့ပဲငြားပြီး MacOSx ကြီးရဲ့ Welcome Song လေးကို နားမထောင်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီတော့ ဘာမှမဖြုတ်မတပ်ဘဲ ဒီတိုင်းလေးပဲ Install လုပ်လိုက်ရအောင်၊ ဒီ Customize အကြောင်းသိချင်ရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း Google is your best friend. ပေါ့ဗျာ။ Install ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ Checking Installation Disk ဆိုရင် Skip ကိုရွေးပြီးကျော်လိုက်ပါ။ Installing ကို ခဏစောင့်လိုက်ပါဦး။ ပြီးရင် Restart လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
Setp 3: Restart လုပ်ပြီးရင်တော့ BOOT-DEF-146-BUM BootCD ကို ထည့်ပြီး Boot လုပ်ပါ။ -v လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။ Boot Device ကိုမေးတဲ့အခါမှာ 80 လို့ရိုက်ပြီး Enter ထပ်ခေါက်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ System Partitiion နဲ့ Data Partition ကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ System Parititon ကိုရွေးပြီး -v -f busratio=20 (or 7) လို့ရိုက်ပြီး Enter ထပ်ခေါက်လိုက်ပါဦး။ Boot လုပ်ပါပြီ။ ခဏထပ်စောင့်လိုက်ပါ။ Welcome Screen နဲ့ပေါ်လာပြီဆိုရင် Continue ပြီးတော့ ထပ် Continue ပေါ့။ Do you Already OwnaMac? မှာတော့ Do not Transfer my information now ကိုရွေးပြီး Continue ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ How Do you Conect? မှာဆိုရင် ကျွန်တော်ကတော့ Local Network ကိုပဲရွေးလိုက်ပါတယ်။ Your Internet Connecton မှာတော့ ကိုယ့်မှာအင်တာနက်ရှိတယ်ဆိုရင် Windows PC ရဲ့ Setting အတိုင်းပေးလိုက်ပေါ့။ Apple ID ကိုပေးရင်လည်း ရှိရင်ထည့်ပေးလိုက်မရှိရင်မပေးနဲ့ပေါ့။ Continue ကိုသွားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Apple ID ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ပြောပါလိမ့်မယ်။ Continue ကိုနှိပ်ပြီးသာ သွားလိုက်ပါ။ Registration Information ကိုလည်း သူမေးတာလေးတွေ ထည့်ပေးလိုက်ပါဦး။ သူမေးတာတွေ အားလုံးပြည့်စုံအောင် ထည့်ပေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ရပါပြီ။ MacOSx ကို Install လုပ်တာပြီးသွားပါပြီ။
Step 3: နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ BootLoader ထည့်သွင်းပေးရပါမယ်။ ကျွန်တော် Asus M/B မှာ အဆင်ပြေခဲ့တဲ့ Snow BootLoader ကိုပဲ သုံးပါမယ်။ လွယ်လွယ်လေးပါ။ Snow BootLoader ကို Install လုပ်ပြီးရင် Restart လုပ်လိုက်ပါ။ BootCD ကို ထုတ်ပြီး ဒီအတိုင်း Boot တက်ကြည့်ပါ။ Without BootCD ပါပဲ။ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာကတော့ စာဖတ်သူများလည်း ဒီအတိုင်းအဆင်ပြေမယ်လို့ အာမမခံရဲပါဘူး။
ZawGyi သုံးချင်ရင်လည်းရပါတယ်။ http://www.waiphyok.com/2007/10/13/z...-for-mac-os-x/ မှာ ကျွန်တော်တွေ့ထားပါတယ်။
Snow Leopard Retail DVD (10.6.2) (8.5GB) ကို BootCD သုံးပြီး Windows PC ပေါ်မှာတော့ ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာ မရသေးပါဘူး။ ခု OS Version ကတော့ 10.5.1 ပါ။ စမ်းသပ်အသုံးပြုနေစဉ်မှာ ခဏပစ်ထားခဲ့ပြီး ဘာမှမလုပ်ဘဲ မိနစ် ၂၀ လောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် မောက်စ်လည်းမလှုပ်တော့ဘူး။ Keyboard လည်းမရတော့ဘူး။ ဒါဆိုရင် Restar လုပ်ရပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ ခဏပစ်ထားခဲ့ချင်တယ်ဆိုရင် Logout လုပ်ထားလိုက်ပါ။ ဒီလိုပြဿနာရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်စမ်းပြီးသလောက်ကတော့ PC တိုင်းမှာလိုလို အဆင်ပြေချင်မှပြေပါလိမ့်မယ်။ အဓိက အဆင်မပြေဖြစ်တာကတော့ BootLoader ပါပဲ။ ကျွန်တော့် Asus M/B မှာကတော့ Snow BootLoader လေးနဲ့အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Acer 4736z မှာတော့ အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး။ Wifi လည်းမရတော့ပြန်ဘူး။ အဲဒီလိုပြဿနာတွေတော့ရှိတတ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ထဲမှာ ကိုယ်နဲ့တူတူအဆင်မပြေဖြစ်ရာကနေ အဆင်ပြေသွားတဲ့ သူတွေရေးထားတဲ့ Post တွေလိုက်ရှာဖတ်သင့်ပါတယ်။ ခု ဒီ MacOS on Windows PC မှမဟုတ်ပါဘူး။ Google ကို နိုင်နိုင်ခိုင်းတတ်ဖို့တော့ လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့တော့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ Mac ကိုတစ်ကယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ Apple ၀ယ်သုံးတာအကောင်းဆုံးပါပဲ
photo psd file (ဖိုတို ရှောပ်အတွက်အသင့်သုံးဖိုင်လ်များ)
http://fotoramok.net/ (ဒါလေးကတော့် လိုအပ်တာယူလို့ရအောင်ပါ)
တစ်စက္ကန့်ပဲလိုတယ် (သို့) Actions
Photoshop မှာ ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ရတဲ့ အလုပ်တွေကို တစ်ခါသာလုပ်ထားပြီး နောင်တစ်ချိန်မှာ ပြန်သုံးလို့ရအောင် ဖန်တီးပေးထား ပါတယ်။ ဥပမာ သင့်မှာဓါတ်ပုံတွေ အများကြီးကို ပန်းချီပုံစံမျိုး ပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုပါစို့။ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကိုပဲသင်ပြုလုပ်ချင်တဲ့ Step တွေကိုသာ Photoshop ကိုမှတ်သားထားခိုင်းပြီး နောက်ထပ်ပုံတွေကိုတော့ Command တစ်ခု (သို့) Click တစ်ချက်ထဲနဲ့ အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ အဲဒါတွေကို Actions လို့ခေါ်ပါတယ်။
ကဲနမူနာတစ်ခုလောက်လုပ်ကြည့်ရအောင်၊ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ပုံတစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်။
အဲဒီပုံကိုအထက်မှာပြောခဲ့သလို ပန်းချီပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ပြောင်းပါမယ်။ သင်ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ Step တွေကိုမှတ်ထားခိုင်းဖို့တော့ Actions palette ကိုခေါ်ပါမယ် (Windows>Actions) အဲဒီ Actions Palette အောက်ခြေက Create new set ဆိုတဲ့ Button ကိုနှိပ်ပါမယ်။
New set အတွက် နံမည်ပေးဖို့ လာတောင်းတဲ့အခါ mmphotoshop လို့ပေးလိုက်ပါမယ်။ OK ကိုနှိပ်ပါမယ်။
Actions Palette မှာကြည့်ရင် mmphotoshop နံမည်နဲ့ Folder icon လေးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါမယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ Action Palette ကပဲ Create new action button ကိုနှိပ်ပါ။
Name မှာ artist လို့ပေးပြီး Set မှာတော့ mmphotoshop ကိုရွေးထားပါတယ်(အခုပြုလုပ်မည့် Action ကို mmphotoshop ဆိုတဲ့ Action set ထဲမှာသွားထားမယ်လို့ဆိုလိုတာပါ)။ Function Key မှာတော့ F12 ကိုရွေးပေးပါ (အဲဒါက ဒီ Action ရဲ့ Shortcut ပါ)။ ပြီးရင် Record button ကိုနှိပ်ပါ။
အခုအချိန်ကစပြီး သင်ပြုလုပ်သမျှကို Photoshop က artist ဆိုတဲ့ Action အဖြစ်နဲ့ စပြီးမှတ်သားထားနေပါပြီ။ အခုအချိန်မှာ Actions Palette ကို သတိထားကြည့်လိုက်ရင် mmphotoshop အောက်မှာ artist ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုတွေ့ရမှာပါ။
mmphotoshop က Action တွေကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီး သူ့မှာ Action ပေါင်းများစွာ သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ အခု artist ဆိုတဲ့ Action ကိုစတင် record လုပ်နေပါပြီ။
အခုတဖန် Filter>Artistic>Watercolor ကိုရွေးလိုက်ပါပြီ။ Setting တွေကိုတော့ သင်စိတ်ကြိုက်တာရွေးပါ။ ပုံလေးဟာပန်းချီပုံပြောင်း လဲသွားပါပြီ။ အဲဒီနောက် Filer>Render>Lighting Effects ကိုရွေးပါ၊ Lighting effect setting box မှာတော့ Style နေရာမှာ Soft Omni ကိုရွေးပါမယ်၊ ပုံမှာကြည့်ပါ Omni Light တစ်ခုပေါလာပါတယ်၊ သူ့ရဲ့ Center အမှတ်ကို mouse နဲ့ Click and Drag လုပ်ပြီးလိုချင်တဲ့ နေရာမှာထားလို့ ရပါတယ် အခုနမူနာမှာတော့ ဒီပုံအတိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Ok ကိုနှိပ်ပါမယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ Edit>Fade Lighting Effect ကိုရွေးပါ၊ Opacity ကိုတော့ 50% ထားပေးပါမယ်။ ဒါဆိုရင်သင်ပန်းချီကားချပ်အသွင် ပုံတစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးသွားပါပြီ။
Actions Palette အောက်ခြေက Stop playing/recording ကိုနှိပ်ပါ။ အခုဆိုရင် သာမန်ရိုးရိုးပုံတစ်ခုကို ပန်းချီပုံသို့ပြောင်းပေးသော Action တစ်ခုကို သင် Create လုပ်ပြီးသွားပါပြီ။
ထို Action ကိုပြန်လည်အသုံးပြုကြည့်ရအောင်၊ နောက်ထပ်ပုံတစ်ပုံကိုဖွင့်ပါ။ စောစောကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ artist action ကို Actions Palette မှာ Select လုပ်ထားပြီး။ Actions Palette အောက်ခြေမှာပဲရှိတဲ Play selection button ကိုနှိပ်လိုက်ရုံနှင့်ပဲ အလိုလို ပန်းချီပုံအဖြစ်ပြောင်းလဲ သွားမှာပါ။ ဒါမှမဟုတ်လဲ F12 key ကိုနှိပ်လိုက်လဲရပါတယ်။
Actions တွေရဲ့ရှေ့မှာ Toggle dialog on/off ဆိုတဲ့ column လေးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ သူ့ကို On ထားရင် action ကို Play တဲ့အခါမှာ setting တွေကို လာမေးပါတယ် (ဥပမာ- Filter setting) Off ထားရင်တော့ ဘာမှလာမမေးတော့ပဲ default အတိုင်းအလုပ်လုပ်သွားမှာပါ။ နောက်တစ်ခု ကတော့ Action တွေကို တခြားစက်တစ်ခုဆီကိုကူးသွားချင်ရင် ကူးချင်တဲ့ Action Set ကိုနှိပ်ထားပြီး Palette ရဲ့ Fly out menu ကနေ Save Actions ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင် file save dialog ပေါ်လာမှာပါ။ လိုချင်တဲ့နံမည်ပေးပြီး file တစ်ခုအနေနဲ့ Save ပြီးတစ်ခြားစက်တစ်ခုကို သယ်ဆောင် သွားလို့ရပါပြီ။ တခြားစက်တစ်ခုမှာတော့ Actions Palette ရဲ့ Fly out menu ကနေပဲ Load Actions ကိုရွေးပေးပြီး စောစောက ကူးလာတဲ့ Action file ရှိတဲ့နေရာကို ညွန်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Load Button နှိပ်ပါ။ ဒါဆိုအဲဒီ စက်ထဲမှာ Action set တစ်ခုပေါ်လာမှာပါ။
အခု Sample file တစ်ခုပေးထားပါတယ် Download လုပ်ပြီး မိမိရဲ့ Photoshop ထဲမှာ Load Actions menu ကိုအသုံးပြုပြီး သင့်ရဲ့ Photoshop ထဲကိုထည့်ပါ။ အဲဒီအခါ SketchByZaw ဆိုတဲ့ Folder icon အောက်မှာ Sketch နဲ့ Sketch Auto ဆိုတဲ့ Action နှစ်ခု ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
Sketch Auto ကို Select လုပ်ပြီး Action ကို Play ကြည့်ပါလား။ သင်သဘောကျမှာ သေချာပါတယ်။ ချစ်သူရဲ့ပုံကို Sketch ဆွဲချင်ပါသလား ဒီ Action လေးကိုသုံးပါ အချိန်အကြာကြီးမလိုပါဘူး . . . . တစ်စက္ကန့်ပဲလိုပါတယ် . . . . .
ဒီအတိုင်းပဲ သင်အမြဲဆောင်ရွက်နေရတဲ့ အလုပ်တွေကို Photoshop မှာ Action များအဖြစ်ပြောင်လဲကာ အလွယ်တကူလျင်မြန်စွာ ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Photoshop ထဲမှာပါဝင်တဲ့ Default Actions တွေကိုလည်းစမ်းကြည့်စေချင်ပါတယ်။
Layer Mask Blending
Layer mask blending (ဒါမှမဟုတ်) Layer mask fusion ဆိုတာ Photoshop နဲ့ Design ဖန်တီးသူတွေ မသိမဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုထဲမှာ အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းကို Web site banner ဆွဲတဲ့နေရာတွေမှာ အသုံးပြုကြတာများပါတယ်။ File တစ်ခုတည်းမှာ လိုအပ်တဲ့ message ကိုပေးနိုင်တဲ့အထိ ပုံပေါင်းများစွာကို ညင်သာစွာ ကူးပြောင်း blend လုပ်သွားနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
၁) ထို့အတွက် လိုအပ်သော ပုံကိုဖွင့်ပါတယ်။ အခုနမူနာပုံမှာ Blend လုပ်မယ့် Image လေးခုပါပြီး တစ်ခုနဲ့တစ်ခု Overlap ဖြစ်နေပါတယ်။
၂) အောက်ဆုံး Layer ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ Layer2ကို Layer Mask တစ်ခု ပေါင်းပါမယ်။
၃) ပြီးရင် Linear Gradient Fill ဖြင့် ထို Layer2ရှိ ပုံ၏အစပိုင်းနေရာလောက်မှစ၍ ဘယ်ဘက်မှ ညာဘက်သို့ဆွဲပါ။ (Gradient အရောင်ကတော့ အဖြူနဲ့ အနက်ပဲဖြစ်ပါတယ်၊ Layer Mask များအကြောင်း သင်ခန်းစာမှာအသေးစိတ် ဖော်ပြထားပါတယ်)
ဒါဆိုရင် Layer 1 နဲ့2ကြားမှာ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့လေး ကူးသွားတာကို ပုံအတိုင်း တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Layer တွေရဲ့ overlap ဖြစ်တဲ့အနေအထားကို လိုက်ပြီး အနည်းငယ် ချိန်ဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သတိထားရဖို့က Gradient Fill လုပ်တဲ့အခါမှာ သက်ဆိုင်ရာ Layer ရဲ့ Layer Mask ကို Select လုပ်ထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအတိုင်း ကျန်တဲ့ Layer3နဲ့4ကို Layer Mask နဲ့ blend လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က ပုံအတိုင်း တွေ့ရမှာပါ။
Layer Mask အသုံးပြုသွားတာကိုတော့ Layer palette မှာ အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါမယ်။
အောက်မှာနမူနာပြထားတဲ့ ပုံနဲ့ website banner တစ်ခုက ဒီ Layer Mask Blending နည်းကို အသုံးပြုထားတာပါ။ အဲဒီလိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ Gradient Fill ကို Linear အပြင် တခြား Radial, Angle Gradient စတာတွေနဲ့လည်း ပေါင်းစပ်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။